आखिर किन भाईरल भईरहेको छ यो तस्बिर ? संक्रमित भएपछि आमालाई झ्यालबाट हेर्दै गरको छोरा को दृश्यले सबैलाई भाबुक बनायो – Dailny NpNews
आखिर किन भाईरल भईरहेको छ यो तस्बिर ? संक्रमित भएपछि आमालाई झ्यालबाट हेर्दै गरको छोरा को दृश्यले सबैलाई भाबुक बनायो
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ समय: १३:१०:३६
कैलाली – विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण लाखौ मानिसहरु विचलित हुनुको साथै अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाईरहेको छ । नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाईरसको कारण नेपालमा दैनिक हजारौ संख्यामा संक्रमित थपिरहेको छ भने निको भने संक्रमितको तुलनामा कम भइरहदा सरकाले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी गरीरहेको छ ।
यहि कोरोनाको कारण मानिसलाई आफन्त आफन्त विच नै पराईको भावना सिर्जन गर्न बाध्य भईरहेको छ । राससको प्रकाश मिश्रले खिचेको फोटो पछिल्लो समय निकै भाइरल भइरहेको छ । जहाँ कोरोना पोजिटिभ देखिएको आफ्नो आमालाई झ्यालबाट हेरीरहेको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं १ मा खिचिएको उक्त तस्विर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल भईरहेको छ ।
यो पनि , ८१३ पत्रकार सङ्क्रमित
कोरोना भाइसबाट हालसम्म ८१३ जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी सङ्क्रमित भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार ५२२ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी सङ्क्रमित भएका छन् । त्यसैगरी हालसम्म १६ पत्रकारको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको छ । महासङ्घले दिएको जानकारीअनुसार हाल तीन पत्रकार आइसीयूमा छन् भने तीन जना पत्रकारको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरी प्रकाशित समाचारप्रति चित्त नबुझे या गुनासो भए त्यसउपर कानूनी प्रक्रिया जान सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै पत्रकारलाई यस किसिमले धम्की दिनु निन्दनीय र प्रेसविरोधी काम हो भनेको छ । महासङ्घले ध म्की दि नेलाई तत्काल पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउन र पत्रकारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित निकायसँग मागसमेत गरेको छ ।
२०१ पटक हेरिएको